Apple waxay diyaarineysaa hagaajinta kombuyuutarrada iPad iyo Mac | Wararka IPhone
Mark Gurman wuxuu dib ula soo noqday raashinkiisii ​​joogtada ahaa ee qorshayaasha mustaqbalka ee Apple, hadana waxay ku xirantahay inta u dhaxeysa Mac iyo ipad Pro, sida uu sheegayo tifaftiraha Bloomberg, Apple waxay diyaarin laheyd horumarin lagu sameeyo ipadka si ay ugu sii xoojiso dhanka ganacsiga iyo sidoo kale dayactirka kombiyuutarada Mac, labada desktops iyo laptops, iyagoo had iyo jeer daliishanaya ilo aad ugu dhow arinta. Horumarinta iPad-ka ayaa ku imaan doona qaab qalab iyo softiweer, iyo kala duwanaanshaha Mac-ka waxaa lagu cusbooneysiin doonaa noocyo cusub oo ah iMac, MacBook Pro iyo MacBook Air, iyo 5K kormeere. inuu noqon doono qofka beddeli doona Bandhigyada Shaneemo dhawaan la waayey iyo in la soo saari doono iyadoo lala kaashanayo LG Electronics.
1 Tilmaamo cusub oo loogu talagalay iPad Pro
2 Cusbooneysiinta heerka Mac
3 Wadashaqeynta LG
4 Sebtember 7 waa ballanta
Tilmaamo cusub oo loogu talagalay iPad Pro
Apple wuxuu bilaabi lahaa waxyaabo cusub oo software ah gudaha iOS 10, oo si gaar ah loogu talagalay iPad Pro, qeybtii hore ee 2017, in kasta oo aan meesha laga saarin inay ku egtahay badbaadintooda si ay ula wadaagaan iyaga iyo iOS cusub ee 11 ee ay ka bilaabi doonaan dhamaadka sanadka. Waxyaabahan kor loogu qaadayo waxaa ka mid noqon doona adeegsiga cusub ee loo yaqaan 'Apple Pencil', sida awoodda lagu ogeysiin karo dhammaan nidaamka oo dhan, sida Mail, Safari, iyo iMessage., si aad u la mid ah wixii horeyba loogu sameyn lahaa Galaxy Note iyo Stylus. Xilligan qalinka Apple waxaa loo isticmaali karaa oo keliya barnaamijyada si gaar ah loogu talagalay inay la jaan qaadaan.
Isbedelada heerka qalabka ayaa waxaa ku jiri doona tiknoolajiyad shaashad cusub oo dhakhso leh oo u oggolaan doonta in si fudud loo dhayo, iyo sidoo kale shaashadda oo la wareego Isbeddeladani ma imaan doonaan illaa 2017, markii Apple uu sii daayo 10,5-inji cusub iPad Pro, kaas oo horeyba loo sii sheegay toddobaadyo ka hor.
Cusbooneysiinta heerka Mac
Haddii cusbooneysiinta ku saabsan iPad-ku aysan imaan doonin illaa 2017, waxay umuuqataa in wararka kombiyuutarada Apple ay dhowaan imaandoonaan, kahor dhamaadka sanadka. Soo bandhigida kumbuyuutarradan cusub ayaa dhici doonta inta lagu jiro bisha Oktoobar. Cusbooneysiinta waxaa ka mid ah MacBook Air cusub oo leh dekedo USB-C ah, iyo iMac cusub oo wata shaashadda AMD. Laakiin ugubnimada ugu muhiimsan waxay la imaan doontaa MacBook Pro oo ay ku jiri laheyd baarka, oo ay ugu yeerto Apple "Dynamic operating bar" (magacu wuu kala duwanaan karaa), kaas oo noqon lahaa shaashad OLED ah oo na siinaysa badhano kala duwan iyadoo ku xiran deegaanka aan wax ka qabanaynay. Tani maahan wax cusub, waxaana ka hadlaynay muddo bilo ah sheekadan cusub ee la filayay inay dhacdo Muhiimka ah ee Juun laakiin taasi waxay umuuqataa inay imaaneyso bisha Sebtember.
Cusboonaysiinta Macs ka sokow, Apple waxay soo saari doontaa shaashad cusub oo 5K ah oo ay kula adeegsanayso kombuyuutarradooda, waxaana soo saari doonta LG. Shaashadan ayaa noqon doonta tii guuleysan laheyd Disembar Display Display ama Thunderbolt Display, oo Apple ay dhawaan joojisay, taasoo dhowaan bilaabay warar xan ah oo ku saabsan moodello cusub. Waxba lagama sheegin wixii la sheegay xilligaas in matooradan ay isku dari karaan shaxdooda si ay uga caawiyaan inay qabtaan hawlo badan oo dalbanaya kombuyuutarro aan awood badnayn.
Sebtember 7 waa ballanta
Si aan u aragno haddii wararkaas runta ah ay run yihiin, ugu yaraan kuwa la filayo inay yimaadaan qeybta labaad ee sanadka, waa inaan sugnaa toddobaad keliya, tan iyo On Sebtember 7 Apple ayaa horey u xaqiijisay in ay jiri doonaan Muhiim ah soo bandhigida iPhone 7 iyo dhamaan wararkaas aan ka wada hadalnay. Dabcan, waxaan idinka sugeynaa dhammaantiin maalintaas inaad dhacdada nala socotaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Apple waxay diyaarineysaa hagaajinta kumbuyuutarrada iPad iyo Mac
Ma jiraan wax ka socda mac pro
Ku jawaab tany
Soo dejiso waraaqaha ranjiga ee dhacdadii Sebtember 7